Microsoft OneDrive ikozvino inoshanda natively paM1 Macs | ndinobva ku mac
Microsoft OneDrive ikozvino inoshanda natively paMac M1s
Manuel Alonso | 13/01/2022 18:29 | Zvimwe Zvirongwa zveMac
mushure meimwe kumirira mwedzi Sezvo beta vhezheni yeOneDrive yeMacs ine M1 yakaburitswa, isu tatova neapp yacho inowanika kune vashandisi. Microsoft yakachengeta vimbiso yayo uye yakagadziridza OneDrive nenhevedzano yekuvandudza kweMac asiwo ye iPhone ne iPad. Asi Macs anonyanya kuwana kuvandudzwa kukuru maererano neruzivo rwemushandisi uye kugadzikana. Chinhu chakanaka ndechekuti iOS inowana zvirinani kuwanikwa. Sezvavanotaura Win-Win.
Iyo Mac OneDrive nyowani inopa zvirinani mushandisi ruzivo, yakagadziridzwa app kuenderana, uye yakachengeteka zvakanyanya uye mushandisi-ane hushamwari kupfuura shanduro dzakapfuura. Kambani yakatama OneDrive kuenda kuApple's own file provider platform, zvinoreva kuti Microsoft 365 online storage service. inoshanda zvirinani uye inopa mamwe maficha.
chiitiko chitsva Mafaira Pa-Kudiwa yeMacs inomhanya macOS 12.1 kana gare gare, yatove chokwadi. Iyo tekinoroji nyowani yakavakirwa paApple's File Provider papuratifomu iri nani yakabatanidzwa neyekushandisa sisitimu kana ichienzaniswa neyekutanga vhezheni. Izvi zvinoreva zvirinani mushandisi ruzivo, zvirinani app inoenderana, uye zvirinani kuvimbika. Asi zvakare inobvumira Microsoft kupa zvinhu zvitsva, seAnozivikanwa Folder Move.
Iwo maFiles On-Demand matsva anoda macOS 12.1 kana kuti gare gare. Shanduro iyi ichave yazvino inotsigirwa vhezheni. Izvi zvinoreva kuti madivayiri anozongotamira kune matsva Mafaira Pakudiwa kana angogamuchira macOS update.
Zvishoma nezvishoma tiri kuona kuti maapplication ari kuita sei kuenderana neayo Apple processors. Chinhu chakakosha zvikuru kuti kana ivo vanourayiwa vanozviita nenzira inokurumidza uye nekushandisa simba kushoma, nokudaro kuwana kubudirira kukuru uye kubudirira. Nhasi tine maapplication maviri anotoenderana, DropBox uye OneDrive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Microsoft OneDrive ikozvino inoshanda natively paMac M1s
TSMC iri kumisikidza kutenda kuApple
Tora mukana weApple inopa kune vadzidzi vekoreji